1 gore 7 ago #686 by Bobpa567
Ini ndangobva ndatora ichangopfuura yeFort Wayne Int Airport installer. ine faira yangu. Ini zvino ndakatumira Mavara / Mavara kuFaira yangu yefaira. Asi munyaya iyi ndinoona kuti mahwendefa maviri akasikwa ari (1) fort_wayne_intl_airport_fsx uye (2) fort_wayne_intl_airport_fsx_part2. Ndinobata sei chikamu chePart2. Inofanirwa kunge yakabatanidzwa sekuti part2 isiridzo uye inonyora zvinyorwa zvepakutanga.
Chero rubatsiro rukuru rwakakosha!
1 gore 7 ago #687 by rikoooo
Sei uchida kuisa nzvimbo yacho nemaoko? Iyo-auto-installer inogona kubata basa kune yese simulator inobatirana.
"Fort_wayne_intl_airport_fsx" inouya munzvimbo yekutanga uye "fort_wayne_intl_airport_fsx_part2" inouya munzvimbo yechipiri mubhuku rako rekuraibhurari yeFSX.
Kana iwe uchida kuisa manyo ano nzvimbo yaunofanirwa iwe unofanirwa kubatsira mafaira maviri kubva muraibhurari yepamusoro.
1 gore 7 ago #689 by Bobpa567
Ndinotenda nekuda kwemashoko enyu. Chikonzero chandinosarudza kuita bhuku rinowanikwa ndechekuti. Ndine SDD yakatsaurirwa yeAdon scenery uye ini handidi vashandisi kuti vaise mafaira ekuona pane SSD ine Win 10 pairi. Ini handizi nyanzvi asi ndangotevera mazano anopiwa kune mamwe maforamu nezvimwewo.